admin - The Geek Text - Page2of 94
အိမ်မွေးခွေးပေါင်းများစွာကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ တံတားတစ်ခု
အိမ်မွေးခွေးပေါင်းများစွာကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ တံတားတစ်ခု စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ Glasgow ရဲ့ အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ Dumbarton မှ နေထိုင်သူများဟာ ဒီ ပေ ၅၀ ရှည်လျားသော တံတားကို “ခွေးသတ်တံတား” လို့ ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီတံတားကိုရောက်ရင် ခွေးတွေက အောက်ကို ခုန်ခုန်ချပြီး သေဆုံးကြလေ့ရှိလို့ပါပဲ။ ဒီတံတားဟာ အယူသီးမှုများ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နယ်မြေတစ်ခု၊ ဒဏ္ဍာရီလာ နတတ်ဆိုးပုံပြင်များ လွှမ်းခြုံနေတဲ့ နယ်မြေတစ်ခုရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီတံတားကိုရောက်ရင် ခွေးတွေက ဘာလို့ ခုန်ချကြရတာလဲ။ ဒေသခံတွေရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရ တံတားပေါ်မှ ခုန်ချခဲ့တဲ့ ခွေး အရေအတွက်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော် ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်ထားကြပြီး ထပ်တိုး အစီရင်ခံချက်များအရ ၆၀၀ ခန့် ရှိနေတယ်လို့ […]
၂၆ နှစ်ကြာ နေ့တိုင်း ရိတ်ပြီး နေလာခဲ့ပြီးနောက်မှာ သူမရဲ့မုတ်ဆိတ်မွေးတွေကို ထပ်မရိတ်တော့ဘဲ လွတ်လပ်စွာ ကြီးထွားလာစေခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး
သူမရဲ့သူမတူတဲ့လက္ခဏကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပုန်းအောင်းထားလာခဲ့ရပြီးနောက် Rose Geil အမည်ရှိ အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့မုတ်ဆိတ်မွေးများကို လွတ်လပ်စွာ ကြီးထွားလာစေပါတော့တယ်။ Portland နိုင်ငံမှ Geil ဟာ အပျိုဖော်ဝင်စအချိန်၌ သူမရဲ့မျက်နှာပေါ်တွင် ပိုလျှံနေတဲ့ဆံပင်များကို ပထမဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Geil ဟာ ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက် နေ့တိုင်း မုတ်ဆိတ်ရိတ်ရပါတော့တယ်။ သူမနှင့်သူမရဲ့မိဘများက ၎င်းကြမ်းတမ်းတဲ့အမွေးအမျှင်မပေါက်စေရန်အတွက် အရာအားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ လေဆာကုထုံးနှင့် ဆေးဝါးများအပါအဝင် ကုသမှုအမျိုးမျိုးကို ဆရာဝန်များက အကြံပြုခဲ့ပေမဲ့လည်း အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ” ဆရာဝန်တွေက စမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဆေးဝါးတွေက အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချလာတာကြောင့် ကျွန်မရဲ့မုတ်ဆိတ်မွေးကြီးထွားမှုကို ဆေးဝါးတွေနဲ့ ထိန်းဖို့ တစ်နှစ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် တကယ်ထိရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူး” လို့ Geil က အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ သူမဟာ polycystic […]
အထီးက်န္ျဖစ္ေနေသာ သမီးေလးအေဖာ္ရေအာင္ ဆိုၿပီး အ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္ကို ခ်ဳပ္ေပးခဲ့မိရာမွ ထိုအ႐ုပ္ေလးကိုပဲခ်စ္မိၿပီး လက္ထပ္ယူလိုက္သည့္အျဖစ္
မိဘတိုင်းကတော့ ကိုယ့်သားသမီးများရဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်ကြည့်ရင်း ထုတ်မပြောလည်း အလိုက်သိစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှ အသက်၃၇နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ထိုအသက်အရွယ်ထိ သူငယ်ချင်းမရှိ ချစ်သူရည်းစားလည်းမရှိနဲ့ အမြဲစိတ်ဓာတ်ကျပြီး အထီးကျန်သလိုခံစားနေရတာကို မိခင်ဖြစ်သူကမြင်ပြီး စိတ်မကောင်း၍ အဖော်တစ်ယောက်ရှာပေးခဲ့သည်။ မိခင်ဖြစ်သူသည် Marceloအမည်ရှိ အရုပ်လေးတစ်ရုပ်ကို ချုပ်ကာ သမီးဖြစ်သူအတွက် အဖော်ရအောင်ပေးခဲ့ရာ သမီးလေးမှတစ်လလောက်အကြာတွင် အရုပ်လေးကိုချစ်မိသွား၍ အရုပ်နဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုအခါ မိခင်ဖြစ်သူသည် သမီးလေးရဲ့စိတ်ကျေနပ်ဖို့ကအရေးကြီးတာကြောင့် ဧည့်သည်အယောက်၂၀၀လောက်နဲ့ လက်ထပ်ပွဲလေးကျင်းပပေးကာ ဟန်းနီးမွန်းလေးပါ ထွက်စေပြီး လက်ရှိမှာတော့ အမျိုးသမီးသည် အရုပ်ကလေးငယ်တစ်ရုပ်ကိုပါ ချုပ်လုပ်ခိုင်းပြီး သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ သားသမီးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားလျက်ရှိသည်။ 1. 2. Rain (For Ialinks) Unicode အထီးကနြျဖွစျနသေော သမီးလေးအဖောျရအောငျ ဆိုပွီး အရုပျလေးတစျရုပျကို ခြုပျပေးခဲ့မိရာမှ ထိုအရုပျလေးကိုပဲခစြျမိပွီး […]
သတို႔သမီးျဖစ္သူကသာ ၿပဳံးေပ်ာ္႐ႊင္စြာနဲ႔ မဂၤလာပြဲကို က်င္းပေနေပမယ့္ သတို႔သားကေတာ့ တစ္ခ်ိန္လုံးေခါင္းကိုငုံ႔ထား၍ အမ်ားရဲ႕ေဝဖန္ျခင္းကိုခံေနရ
မင်္ဂလာပွဲနေ့လေးသည် ချစ်တဲ့သူတိုင်းအတွက် အပျော်ရွှင်ရဆုံးနဲ့ တက်ကြွနေရမည့်အချိန်လေးဆိုပေမယ့်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်မချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ရသည့်အခါ မျက်နှာပေါ်က အပြုံးလေးတွေဟာ ကင်းမဲ့နေတတ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ တရုတ်နိုင်ငံ Anhuiပြည်နယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော မင်္ဂလာပွဲလေးသည် သတို့သားဖြစ်သူမှ တစ်ချိန်လုံး ခေါင်းကိုငုံ့ထားပြီး ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမကြည့်ပဲ ဧည့်သည်များကိုပင် ဂရုမစိုက်သည့်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့် လူအများရဲ့ ပြောစရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ သတို့သားရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် အများက လူကြီးမိဘတွေအတင်းပေးစားလို့ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ရခြင်းကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်နေသည်ဟု ထင်ထားကြသော်လည်း သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် တက္ကသိုလ်တက်ချိန်က အတန်းဖော်တွေဖြစ်ကြပြီး ဘွဲ့ရချိန်မှာလည်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်ရှိခဲ့ကြရင်းနဲ့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် ချစ်သူသက်တမ်း ၁နှစ်ခွဲအကြာမှာတော့ နှစ်ဖက်မိဘသဘောတူညီမှုကိုရယူပြီး မင်္ဂလာပွဲလေးကျင်းပခဲ့ရာ သတို့သားဖြစ်သူသည် မနက်အစောထရပြီး အလုပ်ရှုပ်နေ၍ အစားမစားရသေးတာကြောင့် ဗိုက်အရမ်းဆာလာပြီး မခံနိုင်တော့၍ မပြုံးရယ်နိုင်တော့ပဲ သည်းခံကာ ခေါင်းကိုအောက်ငုံ့ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။ Rain (For Ialinks) Unicode […]
ဇလွန်မြို့က အသက် ၇၀ နဲ့ ၂၇ နှစ်အရွယ် မောင်နှံ နှစ်ယောက်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဖူးစာ ဇာတ်လမ်း ( အခုချိန် အပျိုကြီးဖြစ်နေတဲ့သူတွေ အားကျသွားအောင် မန်းရှင်းခေါ်ပေးလိုက်ပါအုံး )
ဇလှနျမွို့က အသကျ ရ၀ နဲ့ ၂၇ နှစျအရှယျ မောငျနှံ နှစျယောကျရဲ့ ထူးခွားတဲ့ ဖူးစာ ဇာတျလမျး ( အခုခြိနျ အပြိုကွီးဖွစျနတေဲ့သူတှေ အားကသြှားအောငျ မနျးရှငျးခေါျပေးလိုကျပါအုံး ) ယနေ့လိုငျးပေါျမှာ ပြံ့နှံ့နတေဲ့ အကွောငျးအရာကတော့ ဇလှနျမွို့က အသကျ ရ၀ နဲ့ ၂၇ နှစျအရှယျ ဇနီးမောငျနှံ နှစျယောကျရဲ့ အကွောငျးပဲ ဖွစျပါတယျ။ ဇှနျလ ၁၂ ရကျနေ့မှာတော့ သူတို့ နှစျယောကျရဲ့ မငျ်ဂလာလကျမှတျရေးထိုးတဲ့ အခမျးအနားကို ပွုလုပျခဲ့ပွီး ပြောျရှှငျစှာ လကျထပျခဲ့ကွတာ ဖွစျပါတယျ။ အသကျ ရ၀ အရှယျ သတို့သမီး အနျတီဖူးကတော့ ဇလှနျမွို့မှာ လူသိမြားသူ တဦးဖွစျပွီး သူတို့ စုံတှဲရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးတှကေို တစျတော့မှာ တငျရငျးနဲ့ အှနျလိုငျးပေါျမှာ […]
ဇနီးျဖစ္သူမွ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရစဥ္ ခ်ဥ္ခ်င္းတက္ကာ ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕မ်က္ႏွာကိုျမင္လိုက္တိုင္း ေအာ့အန္ခ်င္လာတာေၾကာင့္ မျမင္ရေအာင္ မ်က္ႏွာကိုဖုံးေပးထားရသည့္အျဖစ္
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖူးသည့် မိခင်တိုင်း ချဉ်ချင်းတက်ကာ တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး ထူးဆန်းသောအရာများကို စွဲလန်းနှစ်သက်ပြီး ထိုသို့သောစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း မပြုလုပ်ရပါက စားမဝင်အိပ်မပျော်တဲ့ထိကို ဖြစ်တတ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ တရုတ်နိုင်ငံ Guangdongပြည်နယ် Huizhouမြို့တွင် နေထိုင်သော ခင်ပွန်းသည်တစ်ဦးသည် ဇနီးသည်မှ သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမမြင်ရလေအောင် တစ်ချိန်လုံး မျက်နှာဖုံးကို တပ်ဆင်ထားခဲ့ရသည်။ ဇနီးဖြစ်သူသည် ပထမဆုံးကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရကာ ကိုယ်ဝန်ချဉ်ချင်းတက်သည့်အနေနဲ့ ထူးဆန်းစွာဖြင့် ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ မျက်နှာကိုမြင်တွေ့လိုက်တိုင်း ချက်ချင်းပဲ အော့အန်ချင်လာတာကြောင့် ဖြစ်သည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဇနီးဖြစ်သူကို အနီးကပ်ဂရုစိုက်ပေးချင်သည့်အတွက် maskတစ်ခုကို မျက်လုံးပေါက်လေးပဲဖောက်ကာ ဇနီးသည်မမြင်ရဖို့က အရေးကြီး၍ နေရခက်ပေမယ့်လည်း တစ်ချိန်လုံး တပ်ဆင်ထားပေးခဲ့သည်။ Rain (For Ialinks) Unicode ဇနီးဖွစျသူမှ ကိုယျဝနျလှယျထားရစဥျ ခြဥျခငြျးတကျကာ ခငျပှနျးသညျရဲ့မကြျနှာကိုမွငျလိုကျတိုငျး အော့အနျခငြျလာတာကွောငျ့ မမွငျရအောငျ မကြျနှာကိုဖုံးပေးထားရသညျ့အဖွစျ ကိုယျဝနျဆောငျဖူးသညျ့ မိခငျတိုငျး ခြဥျခငြျးတကျကာ တစျမြိုးမဟုတျတစျမြိုး […]
သူဌေးဆီကနေ Lexus ကားလက်ဆောင်ရလိုက်ပြီးနောက် မြင်သူတိုင်းအပျော်ကူးစက်သွားစေတဲ့အထိ အော်ဟစ်ရင်းငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး
သူဌေးဆီကနေ Lexus ကားလကျဆောငျရလိုကျပွီးနောကျ မွငျသူတိုငျးအပြောျကူးစကျသှားစတေဲ့အထိ အောျဟစျရငျးငိုကွှေးခဲ့ရတဲ့ ဝနျထမျးတစျဦး နိုငျဂြီးရီးယားအမြိုးသမီးတစျဦးဖွစျတဲ့ Onome ဟာ သူမ၏အလုပျခှငျ၌ ကားလကျဆောငျတစျစီးဖွငျ့ စပရိုကျလုပျခံလိုကျရပွီးနောကျ သူမဟာ အံ့ဩရငျး စိတျခံစားခကြျအမြိုးမြိုးဖွငျ့လှှမျးမိုးကာ ပြောျမွူးနခေဲ့ရပါတယျ။ Onome ဟာ လကျဝတျလကျစားကုမ်ပဏီတစျခုမှ မနျနဂြောတစျဦးဖွစျပွီး သူမဟာ အလုပျကွိုးစားမှုနှငျ့ သူဌေးရဲ့ယုံကွညျအားထားမှုကိုလညျး ခံရသူတစျဦးဖွစျပါတယျ။ Instagram ရှိ @bozjewelery page acc မှ မြှဝခေဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစျခုမှာ Onome ဟာ သူမတို့ရဲ့ရှေ့မှောကျ၌ရပျထားတဲ့ အနီရောငျ Lexus ကားက သူမအတှကျဖွစျကွောငျးကို သိလိုကျရပွီးနောကျ သူမဟာ မယုံကွညျနိုငျစှာ အောျဟစျပွေးလှှားရငျး သူမရဲ့လုပျဖောျကိုငျဖကျတစျဦးခငြျးစီအား ပွေးဖကျနခေဲ့ပါတယျ။ ထို့နောကျ Onome ဟာ လကျဆောငျကားအား ပွေးဖကျနရေငျး အပြောျလှနျကာ ကြေးဇူးတငျကွောငျး ရရှေတျနရေငျး မကြျရညျမြားစီးကလြာခဲ့ပွီး သူမနှငျ့ ထပျတူပြောျရှှငျနခေဲ့တဲ့လုပျဖောျကိုငျဖကျမြားကလညျး […]
ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္က သမင္တစ္ေကာင္လုံးေတာင္ မ်ိဳႏိုင္တဲ့ စပါးအုံးေႁမြႀကီးကို ဗိုက္ခြဲၾကည့္လိုက္ရာမွာ ပညာရွင္မ်ား အံ့အားသင့္စရာၾကဳံေတြ႕ရ
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က သမင်တစ်ကောင်လုံးတောင် မျိုနိုင်တဲ့ စပါးအုံးမြွေကြီးကို ဗိုက်ခွဲကြည့်လိုက်ရာမှာ ပညာရှင်များ အံ့အားသင့်စရာကြုံတွေ့ရ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာ ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ အရှည် ၁၈ ပေရှိ မြန်မာ့ စပါးအုံးမြွေကြီးဟာ တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းမြွေကြီးကို ဖမ်းမမိခင်က နောက်ဆုံး သမင်တစ်ကောင်ကို အမဲလိုက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရှိ တောရိုင်းတိရိစ်ဆာန် ဇီဝဗေဒပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတော့ သူတို့မြင်တွေ့ဖူးသမျှထဲက အကြီးဆုံး ‌မြွေကြီးကို လေ့လာဖို့အတွက် ဖမ်းဆီးရာမှာ မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာခဲ့ပါတယ်။ ယင်းမြွေကြီးကို ဒီဇင်ဘာလက ဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဧပြီလအထိ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထိန်းသိမ်းထားရာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့ကမှ အပြင်ကို ထုတ်ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီစပါးအုံးမြွေကြီးရဲ့ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းကနေ မျိုးဥ အလုံးပေါင်း ၁၂၂ လုံးကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ စပါးအုံးအမများရဲ့ […]
ကြည့်မိတဲ့လူတိုင်း အော့နှလုံးနာနေတဲ့ ရွံစရာ ပုစွန်ခြောက်လုပ်နည်းကိစ္စ မြိတ်က ပုစွန်ခြောက်လုပ်ငန်းရှင်များ ဒဲ့ရှင်းပြီ မနေ့က အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ပုစွန်ခြောက် လုပ်နည်း ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ လူအများကြားမှာ ပြောစရာ တခု ဖြစ်နေပါတယ်။ သန့်ရှင်းမှု မရှိတဲ့ ပုစွန်ခြောက် လုပ်နည်းကြောင့် လူအများအပြားက ပုစွန်ခြောက် စားရမှာတောင် လန့်နေပြီလို့ မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗီဒီယိုထဲမှာ ပါတဲ့ ပုစွန်ခြောက်လုပ်နည်းဟာ လွဲမှားနေကြပြီး ပုစွန်ခြောက် လုပ်ငန်းရှင် အားလုံးနီးပါးဟာ ယခုကဲ့သို့ မသန့်ရှင်းတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ လုပ်ကြတာ မဟုတ်ဘူးလို့ လုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောပါတယ်။ ပုစွန်ခြောက် လုပ်နည်းဟာ တယောက်နဲ့ တယောက် အနည်းငယ် ကွဲပြားကြပေမယ့် မြေကြီးပေါ်မှာ ဖြစ်သလို ပုံထားပြီး တံမြက်စည်းနဲ့ လှည်းထုတ်၊ ခြေထောက်နဲ့ နင်းပြတဲ့ အကွက်တွေဟာ […]
အီယူအဖြဲ႕ဝင္ေလာင္းေတြအျဖစ္ ယူကရိန္းကို မဲခြဲအဆုံးအျဖတ္ေပးလိုက္တဲ့ ဥေရာပပါလီမန္အဖြဲ… ယူကရိန္းကို EU ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာေရး ကနဦးအဆင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေလာင္းအျဖစ္ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳေပးလိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဥေရာပေကာင္စီ ထိပ္သီးပြဲမတိုင္ခင္ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ (EP) ဘက္က တခဲနက္ မဲခြဲ အတည္ျပဳေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္အားလုံးအေနနဲ႔လည္း ဒီေန႔ ေန႔လယ္ထိပ္သီးပြဲမွာ မဆိုင္းမတြ ဆက္ေထာက္ခံေပးဖို႔ သမိုင္းဝင္တာဝန္ရွိတယ္လို႔ အခု လႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ထဲ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ဥေရာပေကာင္စီ အႀကီးအကဲကလည္း အဲဒီလို ဆုံးျဖတ္ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။ ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ Charles Michel က ဥေရာပေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလုံးအေနနဲ႔လည္း ယူကရိန္းအတြက္ အခုလို ဆက္ဆုံးျဖတ္ေပးဖို႔ ယုံၾကည္မူ ရွိထားၿပီးပါၿပီလို႔ ဒီေန႔ပဲ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒီ ေနာက္ဆုံး ဥေရာပေကာင္စီ အစည္းအေဝးအတြက္ေရာ၊ […]